10400LM 5000K 80W Led Work Light Fixtures China Manufacturer
Nkọwa:80W Led Work Lights Fix,Egwuregwu Ọrụ 120W,150W Nwa Oge Mkpụrụ Na-adịghị Eche
Home > Ngwaahịa > Ibu Ọrụ > Umu Obu Obu Uhie > 10400LM 5000K 80W Led Work Light Fixtures
Ihe Nlereanya.: BB-HJP-80W-Q
<Ọdịdị Echeghị Agbanwe Akpọrọgwụ > : Nke a na- arụ ọrụ ọkụ ọkụ 80W bụ ngwa ngwa ma dị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na nchebe iji kpochapụ ihe ize ndụ nke iko dị nro agbajiri.
<Super Bright Partner In the Dark> : 8 0W elu bay corn bulb Nye a 360 omni-directional nkọ. Na-enwu n'akụkụ ọbụla na-enweghị ndị nwụrụ anwụ. Mmiri 80W dịka 250W MH ma ọ bụ HID, otu ìhè dị egwu na obere ego. Onye ezigbo onye ọlụlụ na-arụ ọrụ na-eme n'èzí n'abalị, dịka ịkụ azụ, BBQ na ịma ụlọikwuu.
Elu Bay na-arụ ọrụ nwa oge ọkụ 150W Kpọtụrụ ugbu a
80W Ọhụụ na-arụ ọrụ nwa oge 10400Lm Kpọtụrụ ugbu a
10400LM 5000K 80W Led Work Light Fixtures Kpọtụrụ ugbu a
120W Led Temporary Work Light 15600Lumen Kpọtụrụ ugbu a
80W Ebube Ọrụ Ọrụ Ihie Kpọtụrụ ugbu a
130lm / w 5000K 80W na-eduzi bọlbụ ọka Kpọtụrụ ugbu a
80W Led Work Lights Fix Egwuregwu Ọrụ 120W 150W Nwa Oge Mkpụrụ Na-adịghị Eche 80W Led Corn Light 60W Led Corn Light 150W Led Corn Light 450W Led Sport Lights Brazil 80W Led Corn Bulb Light